New Nazi Discoveries inoshandura nhoroondo paBritish Chakavanzika Intelligence naHitler
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » New Nazi Discoveries inoshandura nhoroondo paBritish Chakavanzika Intelligence naHitler
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • UK Kuputsa Nhau
Humbowo hutsva hwabuda pachena hunonongedza kekutanga kubatanidzwa kweBritish mu "Operation Valkyrie" - iyo yakashata yakakundikana 20 Chikunguru 1944 kuronga kuuraya Hitler. Kusvika parizvino mabhuku enhoroondo aifungidzira kuti kuvhiya kwacho kwaingova basa rekupikisa kweGerman.
Munyori wehungwaru Nigel West akawana kuwanikwa uku achitsvaga nhoroondo nyowani ye "Abwehr", iyo yeGerman wartime intelligence agency. Pamwoyo werangano iyi yaive sekuru vaPrince Frederick Solms-Baruth V, avo vari kurwisana nehurumende yeGermany kuti vadzoserwe pfuma yemhuri yavo. Yakaita senheyo yekupikisa uye yakatorwa sechirango nevaNazi mushure mekunge chirongwa ichi chakundikana.
Ikozvino kuwanikwa kwemumiriri weBritish akatorwa neMI6 makore maviri isati yaedza uye akaiswa padyo nepamusoro pekupokana, zvinoratidza kuti MI6 yainyatsoziva, yakabatana - kana isingabatanidzwe nesimba - mukuedza kuuraya.
MI6's asset, Dr. Otto John, yakaiswa zvakakwana kuita musori. Akahwanda segweta reLufthansa, aiwanzofamba achienda kuSpain nePortugal kwaasina kwaakarerekera achirairwa naColonel Georg Hansen (uyo aizosimuka kuti agadzwe semukuru weAbwehr) kuita misangano yakakura nemaBritish maererano nekubviswa kwaAdolf Hitler, pasina kumutsa fungidziro. .
KUSVIRWA KWAKAITWA SEI
Ruzivo urwu haruna kumbobatana kusvika West yaita kuwanikwa. Basa rake rekare rakanga ratoona kuti MI6 vamiririri Winsor anga achisangana naJohn, asi kusvika parizvino hapana anga aona kukosha kwemisangano yavo uye basa rakaitwa naJohn kuna Colonel Hansen. Imwezve simbiso yakabva kuMI5 Oxford-academic uye aimbove muongorori weMI5 Herbert Hart (akazove Muzvinafundo jurisprudence paOxford University), akataura mufaira raJohn richangoburwa MI5 kuti anga achishandira maBritish kubvira 1942.
Izvi zvinoburitsa mwenje mutsva pachirongwa chakakurumbira, icho chaimbonzi ibasa rekupikisa kweGerman. Semusori, basa raJohn raive rekuita semurevereri pakati peGeorg Hansen, neMI6. Kusvikira tsvakiridzo yeWest, ichaburitswa mubhuku rake ririkuuya, kubatana uku kwanga kusiri pachena.
WITHHERED SECRET INTELLIGENCE SERVICE RECORDS ZVICHITI ZVICHITI ZVAUNOGONA KUSVIRWA NEPUBLIC - THE MISSING LINK
MI6 inobata faira rakavharwa paOtto John, iro risingazodzikisire nechikonzero chekuti Sevhisi haina chinodiwa nemutemo kuita kudaro, uye ine basa rekuchengetedza kuzivikanwa kwevose vamiririri, kunyangwe avo vakafa kare. Dr. John vakafa muna March 1997.
Solms-Baruth akaenderera mberi nekurwira kwababa vake kuti nzvimbo yemhuri, parizvino ichiri neFederal Republic, idzoke. Yakatorwa nemaNazi nekuda kwebasa repakati rakaitwa nasekuru vake Prince Frederick III mukukwikwidza kwaChikunguru 20. Sekuru vake vakaita vese sechipangamazano kubumbiro idzva, rekupondwa, zvichibva pamuenzaniso weBritish, uye vakapa nhare yake seHQ yekugadzirira kurangana.
Yakanga iri tsvakiridzo yakakura yechikwata chaPrince Frederick Solms-Baruth V yakatungamira Nigel West kuti asimbise kuti nhare yeBaruth yakanga yave dzimbahwe rekupokana, nekugara maAbwehr vakarangana vakapa mabhomba eBritish uye nguva-fuse yebhomba uyezve kuwana. chinongedzo kuBritish Intelligence kuburikidza naOtto John.
“Izvi hazvisati zvamboitika. Chinangwa chetsvakiridzo iyi chaive chekusimbisa imba yasekuru vangu semuzinda wekurwisa. Handina kumbofunga kuti zvaizoratidza kubatanidzwa kweBritish mukuyedza kudzikisa mumwe wevarume vakaipa kwazvo munhoroondo. "
December 9th inoona imwezve kutongwa kwemutemo pamakore makumi matatu nemaviri ekudzorerwa kweSolms-Baruth mumatare eGerman uye inosanganisira humbowo hutsva uhu.
NEZVEPRINCE FREDERICK SOLMS-BARUTH V:
Zvimwe zvinogona kuverengwa pano: https://www.solms-baruth.com/about-pince-frederick-solms-baruth-v
Zvimwe zvinogona kuverengwa pano: http://nigelwest.com/abouttheauthor.htm